2018 Miyuu Dhimnaa Tafaariiqda Sannadku? Waa tan Sida Loo Badbaadiyo | Martech Zone
2018 Miyuu Dhimnaa Tafaariiqda Sannadku? Waa tan Sida Loo Badbaadiyo
Isniin, April 16, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Jon Croy
Caruurta iyo caruurta qalbigoodaba si isku mid ah ayey uga murugoodeen dhicitaanka Alaabta 'R' Us, halyey warshadeed iyo silsiladdii tafaariiqda ee hadhay oo si gaar ah diiradda u saartay alaabada ay ku ciyaaraan. Xiritaanka dukaanka ayaa meesha ka saaray dhamaan rajadii laga qabay in tafaariiqda tafaariiqda - oo ah meel ay waalidku u xiiseeyaan, boqortooyo yaab ku leh carruurta - waa la badbaadin karaa.
Waxa xitaa ka sii murugo badan waa in Alaabta 'R' Us waa la badbaadin lahaa.
Super-super-toy-ka alaabada lagu ciyaaro ayaa ku dhacay dhibane dhowr tafaariiq oo tafaariiq ah, kaligoodna ma ahan. Cushman & Wakefield waxay ku qiyaaseen US xiritaanka dukaamada ayaa kici doona 33% sanadka 2018, iyadoo la baabi’inayo in ka badan 12,000 oo xarumood
Intii u dhaxeysay geerida RadioShack, hoos u dhaca JCPenney iyo soo bandhigida dad kale oo aan tiro lahayn, macaamiisha ayaa ku xanuunsanaya xiritaanka dukaanka! calaamadaha iyo cinwaanada. Iyadoo Sears, Claire's iyo Foot Locker ay diyaar u yihiin inay daadiyaan goobo badan, waxyaabo uma fiicna dukaamada tafaariiqda iyo hoobiyeyaasha.
Marka la eego xaaladda, waxaa laga yaabaa inay soo jiidan karto in la caddeeyo Don McLean muusikada asalka ah, intaad heesaysid, 2018 waa sanadkii tafaariiqda wuu dhintay! Laakiin ha yeerin digniinta weli. Rajo ayaa laga qabaa tafaariiqleyda diyaar u ah inay la qabsadaan oo ay qaataan isbadalada badan ee ku soo kordhay macaamiisha khibradooda wax soo iibsiga.
Tafaariiqleyaal badan ayaa halgan ugu jira sidii ay uga gudbi lahaayeen Saamaynta Amazon (arrimo kale), laakiin waxaa la joogaa waqtigii taas la beddeli lahaa. Inkasta oo shirkadda weyn ee loo yaqaan 'dot-com' ay caddeeyeen inay tahay mid ka soo horjeedda dukaamada dhaqameed, haddana ma jirto sabab ay dukaamada u garan waayaan awooddooda dhabta ah.
Si looga adkaado qaar ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee tafaariiqda, kuwa lebenka iyo hoobiyeyaasha waa inay u diyaar garoobaan inay kordhiyaan fursadaha dukaanka, si wax ku ool ah u iibiyaan uguna dhiirrigeliyaan alaabada, buuxiyaan farqiga u dhexeeya dhijitaalka iyo jir ahaaneed, taasoo ugu dambayntii kordhisa macaashka iyo hagaajinta khibradooda macaamiisha.
Wallet iyo dalab
Dhibaatadan caadiga ah waxay si isdaba joog ah u haysay waxyaabaha la jecel yahay ee Toys 'R' Us iyo Maamulka Ciyaaraha. Xaaladda ku jirta: weligaa miyaad ka fikirtay sababta aad uga dukaameysatay Alaabta 'R' Us?
Dadka waaweyni halkaas ayey aadeen si ay hadiyado u soo iibsadaan (“Baahida”). Wallet-ka, si kastaba ha ahaatee, waa hal ama in ka badan shahaado oo laga soocay asalka Baahida. Shandaddu wax damac ah malahan inay gasho dukaan - waa shaqo.
Macaamiisha Maamulka Isboortiga waxay la kulmeen dhibaato la mid ah, maadaama macaamiisha ay inta badan dukaameystaan ​​iyagoo u diyaar garoobaya xilli ciyaareedka cusub Kadib waxay arkeen qiimaha sii kordhaya waxayna ku adkaatay inay sii socdaan.
Waxaa jira xaalad kale - mid waaliddiinta caajiska ahi ay rabaan inay waqti la qaataan carruurtooda. Markaad gasho labada dukaan, Wallet ma laha qorshayaal gaar ah oo lacag lagu kala qaato. Waalidiintu si kasta oo ay halista u qaataan, iyagoo rajeynaya inay si jaban ku soo galaan oo ay ku baxaan.
Reeraha rajada leh ayaa ka reeban. Waalidiinta cusub ("Wallet") ayaa ku faraxsan inay iibsadaan wax kasta oo ay u baahan yihiin. Iftiinka dhalaanka cusub wuxuu leeyahay xaddidnaantiisa, si kastaba ha noqotee, markaa ha ka fileynin rabitaanka kicintu inuu sii dheeraado ka dib:
Miisaaniyadda waa la dhaafay markii afraad
Cunug cusub ayaa yimid
Ilmaha labaad ayaa imanaya
Tafaariiqleyda ayaa inta badan seegta fursado ay ku midoobaan Shandad iska caabbisa oo leh Baahi weyn. In kasta oo ay jiraan waqtiyo ay u muuqan karto wax fudud (tusaale: qoysaska filanaya), waxaa suurtagal ah in Wallet iyo Demand la isu soo dhoweeyo iyadoo:
U siinta macaamiisha liistada cad oo kooban dhammaan alaabada laga heli karo dukaanka
Isagoo sharaxaya halka ay ku yaalaan alaabadaasi
Dalbashada aalado ka caawin kara macaamiisha inay wax u iibsadaan si hufan, sida khariidado ama liisaska dukaamaysiga ee dhijitaalka ah
Qaadashada qaabka dukaanka si loo hagaajiyo wax iibsiga dukaanka
Fulinta barnaamijyada ku qanacsanaanta sida iibsashada khadka tooska ah ee dukaanka
Ugu dambeyntiina, marka aad haysato macmiil aysan ku liqin dukaammadii burburay, waxay u dhowdahay inay dib u dhigaan oo ay u maleeyaan iibsigooda.
Isbadalka dhijitaalka ahi waxba kuma laha dadaallada gudaha. Macno malahan hadii ganacsade X u maleeyay inay fikrad fiican tahay - macaamiisha waxay la noqotay fikrad wanaagsan! Waxay kobciyaan isbeddel dibadeed, dhaqan.
Labadaba Toys 'R' Us iyo Maamulka Isboortiga waxaa la siiyay fursad ay ku aqbalaan isbeddelka dhijitaalka ah isla markaana ay ku dhex milmaan beeshooda wax iibsiga. Ugu dambeyntii way ku fashilmeen, laakiin natiijooyinku way ka duwanaan kari lahaayeen.
Maamulka Ciyaaraha: Waalid ahaan waxaan rabay inaan booqdo websaydhka shirkadda, oo aan cadeeyo isboortiga, horyaalada iyo kooxda, iyo inaan helo cornucopia talooyinka waxyaabaha la heli karo.
Alaabada 'Alaabta' R 'Us: Hada halkan fursad ayaa loo helay si loo abuuro barnaamij ay caruurtu ka dhex raadin karaan toy kasta, dhisaan liis ay rabaan, ka dibna ku wareejiyaan Hooyo iyo Aabe si ay u shaandheeyaan una wadaagaan (iimaylka, warbaahinta bulshada, iwm.). Waxay soo bandhigi laheyd xal fudud oo fudud - laakiin qurux badan - dhalashada, ciidaha iyo munaasabadaha kale ee gaarka ah.
Bakhaarada / Bakhaarada Kaydka Kale ee Xafiiska: Qiyaas liiska dhammaan qalabka dugsiga ee khuseeya oo si toos ah u soo saara ka dib marka lagu dhawaaqo liiska fasalka iyo liiska fasalka. Soo qaadashada dukaanka dhexdiisa, muuqaalkan wuxuu qiimo weyn ugu fadhiyaa waalidiinta mashquulsan.
Dhowr tafaariiqle ayaa ku guuldareystay inay aqoonsadaan muhiimadda ay leedahay bey'adda dukaanka, laakiin waa wax kasta macaamiisha. Markay dukaamada duugoobaan, kala daadsan yihiin, qaab dhismeedkoodu aad u liito, oo ay adag tahay in lala socdo oo shaqaaluhu aad u yaraadaan, macaamiisha ayaa aadi doona meelo kale, maadaama ay weli raadinayaan khibrad wax iibsi oo u gaar ah, laakiin aan xuduud lahayn - waa halkaan tafaariiq dhaqameedka awooddo geeyo
Si ay albaabadooda u furnaadaan, tafaariiqleyda waa inay dib uga fikiraan qaabkii asalka u ahaa dukaanka leben iyo hoobiye. Adoo kordhinaya fursadaha dukaanka, lahaanshaha jeebkooda iyo dalabkooda, fahamka dukaankooda, iyo yareynta farqiga u dhexeeya dhijitaalka iyo jir ahaaneed, dukaamada ayaan ka walwalaynin ganacsatada waaweyn ee e-commerce, ama albaabada loo laabayo - maxaa yeelay waxay yeelan doonaan faa'iido koror iyo horumar waayo-aragnimada macaamiisha.
Tags: Claire'sCushman & Wakefieldkorsashada dhijitaalka ahIsbadal digital ahFuraha Furahaqalin jcjcpenneysuuqyadadukaamada sahayda xafiiskashack radiotafaariiqdaikhtiraac tafaariiqeeddukaamada tafaariiqdailmomaamulka isboortigaqabatooyinAlaabada carruurtu ku cayaarto r
John waa aasaasaha iyo Sarkaalka Suuqgeynta Bar Gudaha. Point Inside waxay abuurtay barmaamijka khariidaynta gudaha ah ee ugu miisaanka badan, muuqaalka hodanka ku ah iyo qiimaha ku habboon.
Sayniska Suuqgeynta Muuqaalka
Mawduuca Kaliya ee Aad Waligaa Ugu Baahan Tahay WordPress: Avada